ओली प्रवृत्तिको भाइरस कोरोनाभन्दा खतरनाक, गम्भीर संकट आउने डा. भट्टराईको चेतावनी – Sanghiya Online
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कडा आलोचना गर्नु भएको छ । उहाले ओली प्रवृत्ति कोरोनाभाइरस भन्दा पनि खतरनाक भएको भन्दै बेलैमा नचिनिए गम्भीर संकट आउनसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्- “कोरोनाभाइरस भन्दा खतरनाक ओली प्रवृत्तिको भाइरसलाई सदाकानिम्ति बिदा गरौं, नत्र यो भष्मासुरले सबैलाई सखाप पार्नेछ !”
उहाले सामाजिक संजालमा यस्तो लेख्नु भएको छ :-